BunnyStudio - Professional Voice-Over Talent ကိုရှာပြီးသင်၏အသံစီမံကိန်းကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူလုပ်ပါ Martech Zone
မည်သူမဆိုသူတို့ရဲ့လက်တော့ပ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဘာကြောင့်ဖွင့်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယို (သို့) အသံဖိုင်လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ပြောပြရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်တေးသံထည့်ခြင်းသည်စျေးသိပ်မကြီး၊ ရိုးရှင်းပြီးထိုတွင်ပါရှိသောအရည်အချင်းသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
သငျသညျသွားရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါနေစဉ်မည်သည့်လမ်းညွှန်များအရေအတွက်အပေါ်ကန်ထရိုက်တာကိုရှာဖွေရန်, BunnyStudio အသံကြော်ငြာများ၊ အသံလွှင့်ရုံများ၊ ရုပ်ရှင်နောက်တွဲများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဖုန်းစနစ် ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်အခြားအသံစီမံကိန်းများနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအကူအညီလိုအပ်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုတိုက်ရိုက် ဦး တည်သည်။ ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးသောဘာသာစကားများစွာဖြင့်ထောင်နှင့်ချီသောအလွတ်တန်းအသံသရုပ်ဆောင်များကိုလက်လှမ်းမီစေနိုင်သည်။
စာရေးသူ၊ ဗီဒီယို၊ ဒီဇိုင်း (သို့) ကူးယူခြင်းအတွက်ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များကိုစစ်ထုတ်။ မေးမြန်းစုံစမ်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအရည်အချင်းကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်၊ စီမံကိန်းကိုအလျင်အမြန်လှည့်နိုင်သူကိုလက်ခံရန် (သို့) အသံအခွက်အနည်းငယ်အကြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာသင်သည်အောင်မြင်သူကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။ သင်၏ script ထဲရှိ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘာသာစကားနှင့်စကားလုံးအရေအတွက်ကိုသာရွေး။ သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နမူနာများမှအသံကိုရှာဖွေပါ - အသံသရုပ်ဆောင်များ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုရှာဖွေ၊ သူတို့၏နမူနာများကိုစစ်ဆေး။ သင်၏စီမံကိန်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပါ။
သင်၏စီမံကိန်းအကျဉ်းတင်သွင်းပါ - သင်၏စီမံကိန်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ပါ။ သင်အသေးစိတ်ပေးနိုင်လေ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုနားလည်နိုင်လေဖြစ်သည်။
သင်၏အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အသံကိုလက်ခံရရှိပါ - သင်၏အဆင်သင့်အသုံးပြုရန်၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ထားသောအသံကိုအတည်ပြုပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်တောင်းဆိုသည်။
အရင်တုန်းက platform ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ် (သူတို့အရင်က VoiceBunny လို့လူသိများခဲ့ဖူးတယ်) နဲ့ငါတို့ podcast အတွက် voice over over ရဖို့ဒီနေ့ကိုပြန်လာခဲ့တယ်၊ Martech Zone အင်တာဗျူး။ တစ်နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်သည်လာမည့်ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသောကောင်းမွန်သောအသံကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒီမှာ Podcast အစီအစဉ်မိတ်ဆက်
ဤတွင် Podcast တခုကို outro င်:
ဘေးဘက်မှတ်စု…ဒီစီမံကိန်းကစကားလုံး ၁၀၀ ထက်နည်းတဲ့ပရောဂျက်သေးသေးလေးဖြစ်လို့အမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်တာပါ။ စီမံကိန်းအများစုမှာသူတို့ရဲ့အမြန်နှုန်းက ၁၂ နာရီထက်နည်းနေတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။
၎င်းပလက်ဖောင်းသည်သင်ယခင်ကသင်အသုံးပြုခဲ့သော voice over over talent ကိုထပ်မံအသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိသည့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခွင်တည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့၏အသံတံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီမှုအချို့ကိုထိန်းသိမ်းလိုသောကုမ္ပဏီများအတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခု!
ပလက်ဖောင်းကိုလည်းပေးထားပါတယ် API ကို သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုမှာအသံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အသံထုတ်လုပ်မှုလွန်အသံတွေကိုထည့်သွင်းလိုတဲ့ကုမ္ပဏီများအတွက်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့အစည်းကြီးများအတွက် BunnyStudio ကိုအသေးစိတ်ပုံစံများသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောရလဒ်များလိုအပ်သောပမာဏမြင့်သောစီမံကိန်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ပေါ့ BunnyStudio.
Tags: အသံအသံတည်းဖြတ်ရေးအသံ Post- ထုတ်လုပ်မှုအသံကူးယူနိုင်သည်ချစ်သူdubbingရုပ်ရှင်နောက်ခံစကားသံရုပ်ရှင်နောက်တွဲယာဉ်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်ပြောဆိုနိုင်သည့်အသံဖုန်းစနစ်လက်ထောက်podcast မိတ်ဆက်စကားpodcast မှ outropodcastingထုတ်လုပ်မှုလွန်ကူးယူဘာသာပြန်ချက်အသံသရုပ်ဆောင်တွေအသံဟုတ်တယ်စကားသံ